कुन राशीका नेताहरुको राजनीतिमा रहने छ सुनौलो भाग्य « Khabarhub
कुन राशीका नेताहरुको राजनीतिमा रहने छ सुनौलो भाग्य
१ असार २०७६, आइतबार
ज्योतिषको सबै भन्दा ठूलो ग्रह बृहस्पति केवल कर्कट लग्नमा मात्र उच्च हुन्छ । चन्द्र तथा बृहस्पतिको अद्भुत संयोगको कारण यो लग्न जनतामा प्रसिद्धि प्रदान गर्ने छ । साथै चन्द्र मंगलका कारण यो प्रसिद्धिले उच्च पदसम्म पुर्‍याउने छ ।
संसारमा चार लग्न भएका मानिस भाग्यको मामिलामा सबैभन्दा असल र भाग्यमानी सावित हुनेछन् । मेष लग्न, कर्कट लग्न, तुला लग्न र मकर लग्न । यिनीहरुको जीवन आमरुपमा भाग्यको साथमा मिलिहाल्छन् । के तपाईं कर्कट लग्न यति प्रभावशाली किन हुन्छन् भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ ?
कर्कट लग्नको स्वामी चन्द्रमा हुन्छ । जो राजसी ग्रह हो । यसमा मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ, जसबाट व्यक्तिलाई साहस र शक्ति मिल्ने छ । शुक्र यसमा लाभको स्वामी हुन्छ । त्यसैले यस्ता व्यक्तिलाई खासै धनको अभाव हुँदैन । बृहस्पतिले यसमा भाग्यको नियन्त्रित गर्छ । तर सामान्य रुपबाट हेर्ने हो भने व्यक्तिको जन्मबाट नै भाग्यको वरदान मिल्ने गर्दछ ।
कर्कट लग्न राजनीतिमा किन लोकप्रिय हुन्छ ?
कर्कट लग्नमा हरेक ग्रह उसैको भावका स्वामी हुन्छ । जहाँ ऊ सबैभन्दा मजबुत हुन्छ । ज्योतिषको सबैभन्दा ठूलो ग्रह बृहस्पति केवल कर्कट लग्नमा मात्र उच्च स्थानमा हुन्छ । चन्द्र तथा बृहस्पतिको अद्भुत संयोगका कारण यस्तो लग्नले जनतामा प्रसिद्धि प्रदान गर्छ । र चन्द्र मंगलका कारण यो प्रसिद्धिले उच्च पदसम्म पुर्‍याउँछ ।
यसमा सूर्य पनि कर्मको स्थानमा सर्वाधिक बलियो रुपमा बसेको हुन्छ । यस्तै यो लग्नमा जन्मजात राजयोग मिल्ने पनि सम्भावना हुन्छ ।
राजनेताको कुण्डली किन कर्कट लग्न वा राशि ? (यहाँ राजनेताको कुरा गर्नु पर्दा केही भारतीय राजनेताको नाम उल्लेख गरिन्छ ।)
– स्वतन्त्र भारतको चन्द्र कुण्डली पनि कर्कट लग्नकै थियो ।
– भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरुको लग्न तथा राशि दुवै कर्कट थियो ।
– इन्दिरा गान्धी तथा सोनिया गान्धीको पनि लग्न कर्कट नै छ ।
– भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री वीपी सिंह तथा देवगौडाको पनि लग्न कर्कट थियो ।
– भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको चन्द्र लग्न कर्कट थियो ।
– दिल्लीकी पूर्व मुख्यमन्त्री शीला दीक्षितको लग्न पनि कर्कट नै थियो ।
कर्कट लग्न भएका व्यक्तिले राख्नु पर्ने सावधानी
– विवाह तथा वैवाहिक जीवनमा सँधै ध्यान राख्नु पर्छ ।
– चरित्र पतनबाट आफुलाई बचाउनु पर्छ।
– स्वास्थ्य तथा जीवनचर्याको सँधै ध्यान राख्नु पर्छ।
– परामर्श लिएर एउटा मुँगा अवश्य धारण गर्नु पर्छ।
प्रकाशित मिति : १ असार २०७६, आइतबार १० : ५६ बजे
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, कोइराला समूहको पाँच बुँदे असन्तुष्टि
काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । आज दिउँसो